Shir looga Hadlayay Dhaqaalaha Somalia oo Muqdisho lagu Qabtay – Radio Daljir
Diseembar 9, 2015 9:50 b 0
Somalia, December 09, 2015-(Daljir)_Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Muqdisho ka furay kulan laba maalmood socon doona oo ku saabsan xoojinta waxqabadka hay’adaha iyo hufnaanta maaliyadeed ee dalka.
Xasan Sheekh oo hadal ka jeediyay shirka ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo muhiimadda ay leedahay in si hufan loo dhiso hay’adaha, isla xisaabtanna uu jiro, arinkaasoo uu xusay inay saldhig u tahay in dhidibada loo taago hannaan dowladeed oo mustaqbalka wax-tar u leh Somalia.
“Waxaanu u baahan-nahay inaan hoos kasoo dhisno dhaqanka Dowladnimada dalka iyo ku shaqeynta sharciga iyo kala dambeynta. Shacabkeenna waxay soo mareen waayo mugdi ah oo keenay in la kala aamin baxo. Hawsha inoo taallana ma ahan mid yar – waana inaanu u wada-is-taagnaa sidii aan dib kalsoonidii dadka ka dhexeysay u soo celin lahayn, dalkana ugu sameyn lahayn dowlad tayadeedu ay sareyso,’’ ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Sidoo kale, madaxweyne Xasan wuxuu xusay inay jiraan caqabado isku-wada-xiran oo u baahan in xal guud loo helo, isagoo tusaale u soo qaatay sida mar walba ay isugu xiran yihiin horumarka, amniga iyo dib u soo kabashada dhaqaalaha dalka.
Xasan Sheekh ayaa Beesha Caalamka ku ammaanay taageerada ay Somalia la garab-taagan yihiin, balse loo baahan yahay buu yiri in waddanka laga caawiyo waxyaabaha muhiimka ah ee dib u dhiska dalka dadajin kara.
“Ma jiro dal caalamka ka mid ah oo intuu burbur ku dhacay soo kabtey, iyadoon kaalmo caalami ah la siin. Haddaan Somali nahay waan qiraynaa in wax la inoo qabtay, laakiinse waxaan doonaynaa in tix-gelin gaar ah nala siiyo, iyadoo loo eegayo baaxadda dhibaatada nagu dhacday iyo waqtigan la joogo oo wax badan ay is-bedeleen,’’ ayuu hadalkiisa ku daray Xasan Sheekh.
Dugsiyada Waxbarasho ee Magaalada Gaalkacyo oo Dib loo Furayo